Rosary for the dead Saturday ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ukucengceleza iNgcwele Irosari yomfi ngoMgqibelo, yazi iimfihlakalo zayo, kwaye uqonde ukubaluleka kwesi siko, hlala ufunda le nto.
1 IRosari eNgcwele yoMgqibelo ongasekhoyo
2 Inkqubo yokuthandazela iRosari ngomfi ngoMgqibelo
2.1 Imfihlelo yokuqala: Ukubhengezwa kweNgelosi
2.2 Imfihlakalo yesibini: Utyelelo
2.3 Imfihlakalo Yesithathu: Ukuzalwa kukaYesu
2.4 Imfihlakalo yesine: Umboniso weNdlu
2.5 Imfihlakalo yesihlanu: Umntwana ufunyenwe etempileni
IRosari eNgcwele yoMgqibelo ongasekhoyo
Ngelishwa, ubomi bayo yonke into ephilayo bufikelela esiphelweni. Ukuphela komjikelo wendalo wobomi, ukuzalwa, ukukhula kunye nokufa, oku kunokwenzeka ngenxa yengozi, ukugula okanye ingxaki emzimbeni, kodwa inyani kukuba sonke sinesiphelo kule moya yasemhlabeni emva koko siyashiya kwaye sijongana nekamva elisilindeleyo kuxhomekeke kwizenzo zethu.
Ukuba umntu wayelungile ebomini kwaye eyihlonipha imithetho elishumi, ngexesha lokufa angakonwabela ukuphumla okungunaphakade ezulwini. Ukuba umntu ebengaphili ngokwemigaqo kaThixo, unokuhlala kwindawo yentlambululo-miphefumlo ngonaphakade, indawo ephakathi kwezulu nesihogo. Okokugqibela, ukuba umntu wayengalunganga, engamthobeli uThixo kwaye enze izono ezininzi, kuya kufuneka bachithe ixesha elingenasiphelo esihogweni behlawulela isono ngasinye.
Njengoko kusaziwa, i Irosari engcwele Ngumthandazo owahlulwe waba ziiMfihlakalo ezisasazwa phakathi kweentsuku zeveki kwaye ngokuxhomekeke kumhla weveki eyenzelwa ngayo, ezinye iimfihlakalo kufuneka zifundwe. Ezi mfihlakalo kuthethwa ngazo zezi, iimfihlakalo zovuyo, iimfihlakalo ezibuhlungu, Iimfihlakalo ezikhanyayo neemfihlelo ezizukileyo.
NgoMgqibelo kufundiswa iimfihlakalo ezivuyayo, emva koko, iimfihlelo eziVuyisayo zezona zichongiweyo ekufundeni iRosari ngoMgqibelo ongasekhoyo. Lo mthandazo unomahluko kwirosari yesiqhelo.
Umahluko kukuba iRosari yabafileyo izinikele ekuthandazeleni umphefumlo womntu othandekayo kwaye ke ngoko kukho umahluko obahlukeneyo kwiitani kunye nemithandazo yokugqibela. Isizathu sahlukile kuba ukholo lubekwe ekuthandazeleni loo mntu akasekho phakathi kwethu kwaye unokufumana ukuphumla okungunaphakade. Unokuba nomdla naku oisabelo eSanto Niño de Atocha.
Inkqubo yokuthandazela iRosari ngomfi ngoMgqibelo
Inkqubo yokuthandazela iRosari ngomfi ngoMgqibelo, ibandakanya ukwenza la manyathelo alandelayo: Siyaziwela, dsidale ifayile ye- Ndingumoni (Ndiyavuma phambi koThixo ...), dsidale ifayile ye- nyota (Uzuko kuyise ...)
Emva koku, sinokuqala ukufunda imfihlelo nganye. Phakathi kwemfihlelo nganye, le nkqubo ilandelayo kufuneka yenziwe ngelixa ukubonakaliswa kwenziwa:
"Owu, Mariya, uswiti, intuthuzelo yemiphefumlo! Sikunika le Mfihlakalo ngovuyo onalo xa, xa ubuliswa yingelosi, ukwaziswa koNyana kaThixo kwabhengezwa kuwe esibelekweni sakho; ngaye sikubongoza ukuba umphefumlo womzalwana wethu (a) ______ nayo yonke loo miphefumlo ikwindawo yentlambululo-miphefumlo, ifumane iindaba ezimyoli zobuNaphakade, naphina apho ziya kuphumla khona.
Sikucela oku ngoYesu Krestu iNkosi yethu.
(Emva koko, kufuneka uthandaze uBawo Wethu, uthethe ishumi ooMariya kwaye uthandaze iGloria)
«Owu Yesu wam, usixolele izono zethu, usikhulule emlilweni wesihogo, thatha yonke imiphefumlo uyise ezulwini, ngakumbi abo badinga inceba yakho.
Yakho ecocekileyo Concepción oh! Nkosi enguMongami, ngobunyulu obukhulu ndicela entliziyweni yam, ukuba imiphefumlo ingalahleki okanye ife ngaphandle kokuvuma.
Nkosi Yesu Krestu, usishiyele imiqondiso yenkanuko yakho kwiphepha elingcwele, apho umzimba wakho ongcwele wawusongelwe xa wawususwe emnqamlezweni nguJoseph: Siphe, Nkosi inenceba, ukuba ngokufa kwakho nokungcwatywa okungcwele , kunye neentlungu kunye nokukhathazeka kukaMama wakho osikelelweyo uMariya, uMama wethu, wanga umphefumlo womkhonzi wakho ______ nabo bonke abakwindawo yentlambululo-miphefumlo mabaziswe, eluzukweni lovuko lwakho, apho uhlala khona ulawula noThixo Bawo kubunye boMoya oyiNgcwele, kuyo yonke iminyaka.
Ukuba ngegazi lakho elixabisekileyo iNkosi umhlawulele. Ukuba uyamxolela ndiyakucela ngothando lwakho olubuhlungu. "
Imfihlelo yokuqala: Ukubhengezwa kweNgelosi
Kule mfihlakalo kuthethwa ngendlela uMariya othobeke ngokupheleleyo awasamkela ngayo isipho sokuba ngumama wonyana kaThixo, uYesu, nokuba thina singabakhonzi bakaThixo simele ukuyamkela njani into yokuba singabantwana bakhe noxanduva olukhulu.
Imfihlakalo yesibini: Utyelelo
Nje ukuba uMaría afumanise ukuba umzala wakhe u-Isabel sele ekwinqanaba eliphambili lokukhulelwa, ugqiba kwelokuba amtyelele, ebonisa uthando olukhulu analo malunga nommelwane wakhe ngesenzo sakhe esihle.
Imfihlakalo Yesithathu: Ukuzalwa kukaYesu
Kule mfihlakalo kuthethwa ngokwamkelwa nguMariya, uYosefu kunye nabalusi abahlukeneyo, uYesu njengoMesiya; konke oku kubulelwe kukuthembela kwabo kuThixo ngokuthembeka. Oko kubonisa ukuba, ngubani othobekileyo othembela kubukho bukaThixo, siya kuziva ngaphandle kwamathandabuzo ezintliziyweni zethu.
Imfihlakalo yesine: Umboniso weNdlu
Ngokwinto eqinisekisiweyo kuMthetho kaMoses, uYesu kwafuneka evezwe etempileni emva kweentsuku ezingama-40; Yile ndlela uMary noJoseph bawuthobela ngayo lo mthetho, besifundisa ukuba kufuneka sithobele imisebenzi yezenkolo, sithobele ngokwenene uThixo ukuze sibe ngamaKristu anyanisekileyo. Ngamaxesha onke thobela uyilo lweNkosi, ulandela iindlela asikhanyisela zona, ngokuzithoba okukhulu nothando ngoThixo, thina kunye nommelwane wethu.
Imfihlakalo yesihlanu: Umntwana ufunyenwe etempileni
Xa uYesu elahlekile wafunyanwa etempileni, into esifundisa yona, njengakwimfihlelo yangaphambili, kukuzalisekisa ngokuthembeka ukuthanda kukaThixo, eneneni noYesu ngokwakhe wagqiba kwelokuba enze njalo engazisanga ngabazali bakhe, uMary noJoseph, ngale nto. Oku kusibonisa ngokucacileyo ukuba uThixo usoloko eza kuqala.
Imithandazo yeRosari eNgcwele yomfi ngoMgqibelo yindlela yokunika imbeko kwabo bantu bashiye inqwelomoya yasemhlabeni, kodwa baqhubeke nokuphila emoyeni kwaye sinoxanduva lokugcina ilifa labo liphila. I-Goodbyes ilusizi kodwa iyafuneka, kwaye ekuhambeni kwexesha, ukuvalelisa kuhlala kuthetha "ukubona kamva"